Inona avy ireo karazana masinina saron-tava azo zaraina? - Teknolojia Smart Tech
Vaovao About Inona avy ireo karazana masinina saron-tava azo zaraina?
Inona avy ireo karazana masinina saron-tava azo zaraina?
Ny masinina maska ​​tarehy dia mamokatra saron-tarehy azo esorina ary milina sy fitaovana amin'ny famokarana sarontava ara-pitsaboana ihany koa. Ny sarontava novokarin'ity milina ity dia tsotra ny mitafy ary mora entina. Ny saron-tava fisaka dia novokarina niaraka tamin'ny lamba telo tsy misy tenona sy taratasy sivana, ary saron-tava azo ampiasaina telo sosona Natao tamin'ny fampidirana sivana iray eo afovoan'ny sosona telo an'ny lamba tsy misy tenona vita amin'ny fibre izay ampiasaina amin'ny asa ara-pahasalamana ho an'ny besinimaro. Ny lamba mitsonika mitsoka miaraka amin'ny votoatin'ny fanoherana bakteria mihoatra ny 99% dia voalamina tsara. Ny tetezana amin'ny orona dia vita amin'ny tady plastika sariaka amin'ny tontolo iainana. Miaina fofonaina izy io ary ahazoana aina, miaraka amin'ny vokan'ny sivana hatramin'ny 99%, izay mety indrindra amin'ny ozinina elektronika.
Ny masinina saron-tava miendrika kaopy dia fitaovana hamokarana sarontava endrika kaopy isan-karazany. Ny miendrika kaopy dia vokarin'ny fampiasana hafanana avo lenta manindry, mamoritra ary mamolavola, fanesorana ultrasonic, fanesorana fako, fehikibo ary fantsom-bozaka ary fomba hafa hamokarana zava-bitan'ny sivana sasany. Saron-tava, fitaovana fanaron-tava dia tsy milina tokana, mila milina marobe hifandrindra sy hiara-miasa amin'ny fanatanterahana dingana maro samihafa.
Ny masinina saron-tava miendrika kaopy dia fitaovana hamokarana sarontava endrika kaopy isan-karazany. Mampiasa fanindriana hafanana avo lenta izy, mamoritra ary mamolavola, fantsom-pandrefesana ultrasonic, fanesorana fako, fehikibo sofina sy fantsom-bozona ary fomba hafa hamokarana karazana sivana isan-karazany amin'ny fahombiazan'ny sivana sasany. Saron-tava, fitaovana saron-tava dia tsy milina tokana, mila milina marobe handrindra ny fizotrany samihafa.
Masinina sarona N95:
The Masinina sarona N95 dia quilt izay mamokatra saron-tava N95. Izy io dia fitaovana sivana elektrostatika haingam-pandeha amin'ny lamba tsy misy tenona misy sosona sy lamba mitsonika, izay afaka mifoka vovoka avo lenta. Fomba endrika tsy manam-paharoa, fandrindrana tsara ny rakotra orona sy fehikibo, mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny tarehy. Karazana mivalona, ​​mora entina. Mety amin'ny ankamaroan'ny endrika endrika.
Masinina sarontava miendrika:
Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny sarontava endrika manokana sy ny fomba famokarana hafa. Ny tena antony dia tsy manam-paharoa ny fomba misaron-tava. Ohatra, ny sarontava-gana ary saron-tavan-kisoa dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fandotoana be. Mahalana isika no mahita azy ireo.
Admin Aogositra 15, 2020
PreviousFiheverana azo ampiharina amin'ny sarontava
ManarakaAza miala sasatra, manaova sarontava！